အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Sennheiser ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 နှင့်အတူ HQ မှာဒူဘိုင်းမီဒီယာရုံးအဆင့်မြှင့်မှုများပေး Audio ၏အစိုးရ
Home » သတင်း » Sennheiser ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 နှင့်အတူ HQ မှာဒူဘိုင်းမီဒီယာရုံးအဆင့်မြှင့်မှုများပေး Audio ၏အစိုးရ
GDMO အကောင်အထည်ဖော်မှု Sennheiser ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000
Sennheiser ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 နှင့်အတူ HQ မှာဒူဘိုင်းမီဒီယာရုံးအဆင့်မြှင့်မှုများပေး Audio ၏အစိုးရ
ဒူဘိုင်းဝေါလ်ထရိတ်စင်တာမှာယင်း၏ဌာနချုပ်တွင်ညီလာခံခန်းမဖို့အဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ဒူဘိုင်းမီဒီယာရုံး (GDMO) ၏အစိုးရ Sennheiser ရဲ့စွယ်စုံဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 ဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုအသံအရည်အသွေးနှင့်အတူ, ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်, ပြည်တွင်းရေးစုဝေးနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေအထိသောခန်းမ၌ကျင်းပ high-profile ကိုဖြစ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အရည်အသွေးကမ်းလှမ်း အများပြည်သူဆွေးနွေးပွဲနှင့်အဓိကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ။
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်၏သိသာထင်ရှားသောရှုထောင့်ကွန်ယက်အသံမူတည်ပြီးဖို့ GDMO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လမ် Belyouha, ဒါရိုက်တာ - GDMO မှာမီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, ကပြောပါတယ် "။ ဒါကြောင့်ပွုလုပျခွငျးသိသိသာသာ, cabling ၏ပမာဏကိုလျှော့ချ interconnectivity ကို, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းရိုးရှင်း, ငါတို့နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများချောမွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားပါတယ်" ဒီတစ်နှစ်, Yamaha နှင့် Sennheiser ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုကို enable ပူးပေါင်း အဆိုပါ Yamaha CL နှင့် QL စီးရီး consoles စနှင့် Sennheiser ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 အကြား။ အဲဒီနှစျခုဖြေရှင်းချက်ကိုမူတည်ပြီးမှရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံ GDMO ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအသင်းအပေါငျးတို့သ console ကိုသူ့ဟာသူမှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကို system ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ် menu ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များနှင့်လည်း RF အဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်ဖို့, လာဘ်နှင့်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း၏ Battery ကိုအဆင့်အတန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ရပ်မှအဖြစ်အပျက်ကနေညီလာခံခန်းမပြောင်းလဲမှုအတွက်စင်မြင့်အပြင်အဆင်များနှင့်ထိုင်ခုံအစီအစဉ်များအဖြစ်မိုက်ခရိုဖုန်း system အတွက်အဓိကရွေးချယ်ရေးစံတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်အသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်သတိပေးခံရ။ ကျင်းပမဲ့နေရာမှာကျင်းပဖြစ်ရပ်များပုံမှန်အားအသုံးပြုသွားမည်ခံရမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုဖြစ်ပေါ်အဖြစ်သို့သော်က system ကို RF ်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံ ပတ်သက်. GDMO ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Sennheiser နှင့်အတူ၎င်း၏ရှစ်နှစ်ဆကျဆံရေးအပျေါတည်ဆောက်ခြင်း, အ GDMO ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 တပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးမစ္စတာ Belyouha အဆိုပါ Sennheiser အသင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့သည် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာစီမံကိန်းများအပေါ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့သည်ငါတို့ကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏မြင့်မားသောအဆင့်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူကူညီပေးဖို့သူတို့အပေါ်မှာအားကိုးနိုငျကွောငျးကိုတဖန်အချိန်နှင့်အချိန်သက်သေပြခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကကျမတို့ကလည်းဘယ်တရားဝင် RFQ ထုတ်ပေးတာရှည်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံနှင့်စီမံကိန်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်ရှည်လျားပြီးနောက်။ "
ရိုင်ယန် Burr, နည်းပညာဆိုင်ရာအရောင်း & လျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာဌာနမှူး, Sennheiser မှာ System ကို Solutions Sennheiser ရှည်-ရပ်တည်မှုနှင့်ဒူဘိုင်းမီဒီယာရုံး၏အစိုးရနှင့်အတူမြင့်မား-တန်ဖိုးထားဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ် "ကဆက်ပြောသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသင်း Sennheiser ဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့နားလည်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးတွေ့မြင်ရန်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလျှောက်လွှာအဘို့အညာဘက်ကိုဖြေရှင်းနည်းသတ်မှတ်သူတို့နှင့်အတူအလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
လေး EM 6000 Dante အသံဖမ်းသုံး SKM 6000 လက်ကိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းပါဝငျသောစနစ်၏ကျောရိုးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Sennheiser အဆိုပါ GDMO ရဲ့ကော်ပိုရိတ်အရောင်များတွင်ဤလက်ကိုင်စိတ်ကြိုက်နှင့် MD 9235 ၏ပုံစံအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆေးတောင့်လည်းအသံအထူးကုရဲ့ထူးခြားတဲ့မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့ထိတ်လန့်မိုက်ခရိုဖုန်းခေါင်းကိုအတွင်းပိုင်း mount တပ်ဆင်ထားသော Pre-Polarized condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဆေးတောင့် ME 9004, နှစ်ဦးစလုံးသည်။ အဆိုပါ GDMO လည်းအခန်းထဲမှာဆူညံသံ၏အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ချက်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ကို attenuation ပေးငါးခု SK ကို 104 bodypack က transmitter နှင့်အတူထိုးမိုက်ခရိုဖုန်း၏ modular စီးရီးထဲကနေ Sennheiser ရဲ့ ME 6000 cardioid မိုက်ခရိုဖုန်းဆေးတောင့်ရွေးချယ်ထားကြသည်။
အဆိုပါ GDMO လည်း Sennheiser ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အားသွင်းဖြေရှင်းချက်သည် 19 "1RU L ကို 6000 အသိဉာဏ်အားသွင်းဘူတာရုံများအတွက်ရွေးချယ်သောအကောင်းဆုံးတိုးချဲ့သိုလှောင်မှုကာလများအတွက်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်အားသွင်း status ကိုတစ်ဦးအမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့သုံးအရောင် LED Display ကိုရှိပါတယ်။ သံသရာနှင့်ဘက်ထရီရဲ့အရည်အသွေးအားသွင်းကြိမ် run အချိန်အားသွင်းကျန်ရှိသောအပူချိန်နှင့် ပတ်သက်. "ကျယ်ပြန့်သေးစိတျ, အပေါငျးတို့သကြိုးမဲ့စနစ်များ Manager ကို (WSM), ကိုလည်း GDMO အဝေးမှမှ set-တက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းလုသောငါတို့တာဝန်ခံအခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကိုဖြေရှင်းနည်းကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည် သူတို့ရဲ့ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း၏ကြိမ်နှုန်း, "Burr ရှင်းပြသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 နှစ်ရုပ်သံလိုင်းလက်ခံမှ Sennheiser ထိပ်တန်း-of-the-range ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် 9000 စနစ်၏ Long က Range mode ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများတတ်၏။ intermodulation ဖျက်သိမ်းရေးအသုံးပြုပုံစနစ်ဖြင့် RF ်ရောက်စွက်ဖက် ပတ်သက်. GDMO ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းနည်း spectrum ကိုအာကာသအတွင်းလုပ်ကိုင်ရန်နောက်ထပ်ချန်နယ်များနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာလုံခြုံရေးဒစ်ဂျစ်တယ် 6000 switchable AES 256 encryption ကိုတပ်ဆင်ထားသည်အတိုင်း, မီဒီယာရုံး၏အခြားအရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်ကိုလည်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။
တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်ခြင်းနှင့်ဆိုးသောအသံရှိလျှင်, လူတွေသတိထားမိကဖြစ်ရပ်မှအဓိကပြတ်တောက်ရဲ့။ အဆိုပါစနစ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကတည်းကသူ့အဖွဲ့သံကိုအတူကလှည်အရာပါပဲ "မစ္စတာ Belyouha ကလည်း, ရှိခဲ့ပါတယ်အပြုသဘောအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခြင်း အရာအားလုံးကောင်းစွာတတ်ခြင်း, အသံသည်ကြီးလာသောအခါဒါပေမယ့်လူတွေကသတိထားမိကြပါဘူး။ တပ်ဆင်ကတည်းကငါတို့သည်နောက်တိုင်ကြားမှုများတွေ့ကိုတစ်အောင်မြင်မှုပါပဲ။ "
Footprint အတိုင်ပင်ခံများကနောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Microsoft Certified Sennheiser အဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာကျက်2- စက်တင်ဘာလ 25, 2019
VITEC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Rapid ချဲ့ဘို့သင်တန်းအမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ရန် - စက်တင်ဘာလ 8, 2019
Sennheiser နှင့် 3D နှင့်ကြိုးမဲ့ Audio အပေါ်တော်ဝင် Opera House မပ်စ်ကတ် Host ကပွဲများ - သြဂုတ်လ 28, 2019
FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် Sennheiser SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကြိုးမဲ့အသံ	2019-06-12